Ahlusunna waljamaaca oo gobolka Gedo ka biloowday dhaqdhaaqyo dagaal oo ka dhan ah Alshabaab – Radio Daljir
Ahlusunna waljamaaca oo gobolka Gedo ka biloowday dhaqdhaaqyo dagaal oo ka dhan ah Alshabaab
Juunyo 17, 2013 3:31 b 0
Garbahaareey, Jun, 17 2013- Saraakiisha Ahlusunna waljamaaca ee gobolka Gedo ayaa sheeagay inay qorshaynayaan dagaalo ay ku qaadaan xarakada Alshabaab ee ku sugan deegaanada Buurdhuubo iyo Baardheere ee gobolka Gedo.
Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal oo ka mida saraakiisha ASWJ ee gobolka Gedo oo maanta waraysi siiyay Radio Daljir ayaa sheegay in ciidankooda ay ku sii dhawaanayaan deegaanka Buurdhuubo, hadana y bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah xarakada Alshabaab oo wali gobolkaasi meel ka mida gacanta ku haya.
Sheekh Xuseen, ayaa sheegay in xog hoose ay ku heleen in ciidankii Alshabaab ee ku sugnaa degmada Baardheere ay bilaabeen inay magaalada gudaheeda isaga baxaan gaar ahaan xiliyada habeenkiiya iyagoo dhufayso ka qodonaya daafaha magaalada, taasina ay muujinayso duulaanka lagu yahay waa sida uu sheegaye.
Sargaalkaasi u hadlay maamulka ASWJ ee gobolka Gedo ayaa sheegay in shacabka ku nool deegaanada wali gobolka ay ka joogaan Alshabaab ay ka cabanayaan dhibaatooyin hor leh oo ay la soo baxeen maamulka Alshabaab, isla markaana ay ku tala jiraan in dhibaatooyinkaasi shacabka ay ku dulqaadaan.
Gobolka Gedo ayaa ka mida gobolada koonfureed ee dalka ee ay wada joogaan ciidanka DF ee Soomaaliya,ASWJ iyo militariga Itoobiya kuwaasoo dhamaantoodba dagaal kala soo horjeeda xarakada Alshabaab oo maamula qaybo ka mida gobolka.
Sheeko Gaaban: qaybtii 3’aad ee sheekadii Ismadhaanto (Dhegayso)
Shil gaari oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Badhan ee gobolka Sanaag (Dhegayso)